सर्वाेच्चकाे निर्णय नआउँदै केपी तर्सेर बाेलाए आकस्मिक बैठक : देउवाले पनि वाेलाए वैठक : अब के हुन्छ ? – List Khabar
Home / राजनीति / सर्वाेच्चकाे निर्णय नआउँदै केपी तर्सेर बाेलाए आकस्मिक बैठक : देउवाले पनि वाेलाए वैठक : अब के हुन्छ ?
admin June 28, 2021 राजनीति Leaveacomment 87 Views
प्रतिनिधी सभा विघटन विरुद्द सर्वेच्चमा चलिरहेकाे वहस अन्तिम चरणमा पुगेकाे वेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैकाे दाैडधुप चलेकाे छ । सत्तापक्ष तर्फ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधामन्त्री केपी शर्मा वली समुह र राजपाकाे महन्त ठाकुर पक्ष छ भने र प्रतिपक्ष वा विपक्षी गठबन्धन तर्फ पाँच दल र एमालेकै माधव खनाल पक्ष रहेका छन ।
यति वेला सर्वाेच्च बाट कसकाे पक्षमा फैशला हाेला भन्ने खुलदुली सबैकाे मनमा छ तर केपी शर्मा वलीले पहिलाे पटक गरेकाे संविधान सभा विघटन सर्वाेच्चले बदर गरेकाे कारण अहिले पनि धेरैकाे बुझाइ प्रतिनिधी सभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीले बार बार सर्वाेच्च प्रति नकारात्मक टिकाटिप्पनी गरेकाे कारण पनि प्रतिनिधी सभा पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने स्वयम प्रधानमन्त्रीलाइ समेत आशंका छ ।
यसकै पेरिफेरिमा रहेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले विभिन्न भेला, वैठक र छलफल जारी राखेका छन भने दुबै पक्ष आफु सही भन्ने धारणा छ । दलहरु के गर्दैछन त नेकपा एमाले केपी समुह र काङ्ग्रेषले किन वाेलायाे त वैठक पुरा पढ्नुस ।
एमालेले बोलायो दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक
असार १३, २०७८, काठमाडौँ — नेकपा एमालेले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको छ । बालुवाटारमा आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले असार १६ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
बैठकमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिई कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गरेको विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णयलाई मान्यता नदिएर अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेका कारण आफूहरू भ्याकेटमा जानुपरेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
फ्लोर क्रस गरेको भन्दै एमालेले उनीहरूलाई सांसद र पार्टीबाट कारबाही गरेको थियो । तर, जेठ २७ गते अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत चार प्रदेश सांसदलाई पुनर्बहाली गरेको थियो ।
साथै बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक स्थिति, प्राकृतिक प्रकोप र कोभिडका बारेमा छलफल भएको थियो ।
सांसदका कानुन व्यवसायीको समय विभाजनबारे प्रधानन्यायाधीशले भने- यो त जिस्क्याएजस्तो भयो ।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ कानुन व्यवसायीको सुनुवाइको आइतबार अन्तिम दिन हो । असार ९ गतेदेखि सुरुवाति बहस गरेका सांसदका कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार २ घण्टा ३५ मिनेट बहस गरेपछि समय सकिनेछ ।
Previous उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप्ने बारे यस्तो आयो कुरा, आधा सिट क्षमतामा सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने तयारी ? यी ब्यबसाय र सस्था…
Next सबै होइन यस्ता सार्वजनिक सवारी मात्र मंगलवारवाट सञ्चालन हुनेछन्